Lọ elu nke ikuku: ihe ncheta nke ihu igwe | Network Meteorology
Towerlọ elu ifufe
Mmadu na-achọsi ike ịmata mgbanwe niile na-emetụta ihu igwe na ihu igwe nke mpaghara. Ifufe bụ otu n’ime mgbanwe ihu igwe dị iche iche nke kpalitere mmasị kachasị ebe ọ bụ na enweghị ike ịtụ ya nke ọma na enweghị ike iji anya nkịtị hụ ya. Dabere na mgbanwe a, ihe karịrị puku afọ abụọ mgbe emechara ya, ọ ka na-eguzo. Ọ bụ ihe gbasara ụlọ elu ifufe. Ọ dị na Plaka agbata obi na Atens n'akụkụ Roman Agora na ụkwụ nke Acropolis. Ọ bụ mbido mbụ n’akụkọ ihe mere eme niile bụ naanị ebe emere iji rụọ ọrụ nlebara anya na igwe.
Ya mere, anyị ga-arara edemede a iji gwa gị akụkọ ihe mere eme, njirimara na mkpa nke ụlọ elu ifufe.
2 Mmalite nke ụlọ elu ifufe
3 Ngwakọta nke ụlọ elu ifufe
A makwaara ya dị ka Horologion ma ọ bụ Aérides, onye wuru ụlọ ahụ na mbara igwe Andrónico de Cirro wuru ya na narị afọ nke XNUMX BC. C., nke onye nrụpụta ihe bụ Vitrubio na onye ndọrọ ndọrọ ọchịchị Rom bụ Marco Terencio Varrón nyere ọrụ. Ọ nwere atụmatụ octagonal ma nwee a dayameta nke 7 mita na a elu nke fọrọ nke nta 13 mita. Ọ bụ otu n'ime ihe ndị kachasị ewu ewu nke ụlọ a nwere nke na-eme ka ọ pụọ iche. Ma ọ bụ na ọ bụ ihe owuwu nke rụrụ ọtụtụ ọrụ. N'otu aka, ọ bụ ụlọ arụsị nye Aeolus, onye bụ Nna nke Ifufe na akụkọ ifo ndị Gris, ya mere, ọ rụrụ ọrụ n'okpukpe. N'aka nke ọzọ, ọ bụ ihe nyocha maka mgbanwe ihu igwe a, yabụ nwekwara ọrụ sayensị ya.
Onye ọ bụla nke ifufe kachasị na-efe na Gris oge gboo ka achọpụtara dị ka Chineke na ha niile bụ ụmụ Aeolus. Nye ndị Gris oge ochie ọ dị ezigbo mkpa ịmata njirimara na mmalite nke ifufe. Ha chọrọ ịmata ebe ifufe ahụ si bịa ebe ọ bụ obodo azụ ahịa nke ji ụgbọ mmiri na-ebugharị Osimiri Mediterenian. Ọganiihu na ọdịda nke azụmahịa na-adaberekarị na ikuku. Ọ bụ ihe dị mma na iji ụgbọ mmiri na-ebugharị ifufe ma ọ bụ na ọ ga-arụ ọrụ dị mkpa na mbufe ngwaahịa. Ihe ndị a niile bụ ihe kpatara iji chọọ ịmụ ihe niile gbasara ikuku. Nke a bụ ebe mkpa ụlọ elu ikuku dị.
Eziokwu ahụ bụ na a họọrọ Tower nke Winds n'akụkụ Rome Agora (ebe ahịa) abụghị na mberede. Ndị ahịa ahụ nwere isi iyi nke ozi bara uru maka ọdịmma ha ma nwee ike ịme mgbanwe dị mma.
Mmalite nke ụlọ elu ifufe
Dika anyi huworo, ikuku bu otu n’ime ihe ndi ozo choro ichoro banyere ihu igwe n’oge. Ndị ahịa nwere ike ịnwe ezigbo ozi dị oke mkpa maka ọdịmma ha. Dabere n’okporo ụzọ ikuku na-efe, enwere ike ime atụmatụ igbu oge ma ọ bụ ọganihu nke ụfọdụ ụgbọ mmiri n'ọdụ ụgbọ mmiri ahụ. Ọ nwekwara ike ịmata ihe ọ ga-ewe tupu ngwongwo ya eruo ebe ndị ọzọ.
Iji chọpụta ma njem ụfọdụ ọ bara uru, a na-eji mgbanwe ikuku eme ihe. Ọ bụrụ n ’ịchọrọ ịme njem ụfọdụ na oke ọsọ na ịdị ngwa, ị nwere ike ịhazi otu ụzọ ma ọ bụ ọzọ dabere na ike na ụdị ifufe na-efe.
Ngwakọta nke ụlọ elu ifufe
Ihe kachasị dị egwu nke ụlọ elu ifufe nọ n'akụkụ ya kachasị elu. Ihe ọ bụla n’ime 8 facades nke ụlọ elu ahụ na-ejedebe na frieze na-bas-enyemaka naanị ihe karịrị 3 mita ogologo. N'ebe a ka a na-anọchite anya ifufe na nke ọ bụla ọ dị ka ọ bụ nke na-efe site na ebe ọ na-eche ihu. Ikuku 8 nke Andrónico de Cirro họpụtara dabara na ọtụtụ akụkụ nke compass Aristotle bilitere. Ka anyị lee ihe ifufe nwere ike ịchọta na ụlọ elu nke ifufe: Bóreas (N), Kaikias (NE), Céfiro (E), Euro (SE), Notos (S), egbugbere ọnụ ma ọ bụ Libis (SO), Apeliotes (O) na Skiron (NO).
Elu ụlọ ahụ nke dị na conical dị na mbụ sitere na ụlọ elu ahụ ma jiri okpueze ọla kọpa Triton God kpu okpueze. Onu ogugu nke Triton Chineke a na eme dika ihu igwe. A na-eji vane ihu igwe amata ntụziaka ikuku. N’aka aka nri ya, o ji mkpara nke na-egosi ebe ifufe si efesasị na O mere ya n'ụzọ yiri nke bolt nke ihu igwe na-eme. Iji mezue ozi na ikuku nke enwetara na ebe nchekwa ahụ, enwere akụkụ anọ nke anyanwụ na facades dị n'okpuru friezes ahụ. Ndị akụkụ anọ a nwere adịghị ike usoro iwu ma nye anyị ohere ịmata oge mgbe ikuku na-efe. N'ụzọ dị otú a, ha nwere ike ịmata nke ọma mgbe igwe ojii na-ekpuchi anyanwụ na oge site na elekere hydraulic.
Ebe ọ bụ na ihe ncheta a ka dị mma, a na-enye ya iji nyochaa ma mụọ ya n'ụzọ nkasi obi na nkọwa. O doro anya na ọ bụ otu n’ime ihe ncheta sayensị kachasị ama ama. Ebumnuche bụ isi nke ụlọ elu a bụ ọtụtụ. Ha rụrụ ọrụ iji tụọ oge na-aga n'ihu kwa ụbọchị na-agagharị kwa ụbọchị, anyị na-enye ekele maka akụkụ anọ ndị a kanyere n'akụkụ ya asatọ. Ejiri marble pantelic rụọ akụkụ ndị a. N'ime ya, e nwere elekere mmiri nke nke ka fọdụrụ ma ị ga-ahụ ọkpọkọ ndị dugara mmiri ahụ site na isi iyi dị na ndagwurugwu nke Acropolis na ndị na-enye ọrụ maka ịba ụba.
Ọ bụ hourglass nke na-egosi oge awa nke ụbọchị mgbe igwe ojii na-acha ya na abalị. Elu ụlọ ụdị pyramid isi obodo nke nkume slabs na radial nkwonkwo kpuchie na taịl nile. Ọ dịlarị na etiti ebe ikuku ihu igwe n'ụdị nke newt ma ọ bụ chi ndị ọzọ dị n'ụsọ mmiri.
Enwere m olile anya na iji ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere ụlọ elu ifufe na njirimara ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Ciencia » Towerlọ elu ifufe